Garoonka xulka kubada cagta Soomaaliya ee Muqdisho oo dib loo furay
Garoonka xulka qaranka kubada cagta ee Muqdisho oo dib loo furay
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xarigga ka jaray wajiga koowaad ee dib u dhiska Garoonka Kubadda Cagta ee Muqdisho ayaa faray Xukuumadda in ay sii dhammeystirto qorshaha dib u soo celinta Tuulada Ciyaaraha oo muhiim u ah soo nooleynta tartannada ciyaaraha kala duwan ee dalkeenna.
Dibadbax looga soo horjeedo mudo korarsiga DF oo laga hortagey
Soomaliya 05.07.2020. 10:28
Madaxweyne Farmaajo ayaa lagu eedeeyay inuu ka gaabiyay soo afjarida khilaafka siyaasadeed ee ka jira dalka kahor doorashooyinka.
La-Taliyihii Ra'iisul Wasaare Khayre oo is-casilay [Akhri Sababta]
Soomaliya 15.05.2018. 15:44
Taliye Odowaa oo sharaxay amar lagu soo rogay ilaalada Xildhibaanada
Soomaliya 16.12.2019. 17:00
Ilaalada Villa Soomaaliya oo dhaawacay Mas'uul katirsan Xukuumadda
Soomaliya 14.02.2018. 10:18
Shirka Gollaha Wasiiradda Soomaaliya oo ka hadlay Doorashada 2020
War Saxaafaded 21.12.2017. 16:31
Farmajo iyo Khayre oo lagu casuumay shir looga hadlayo doorashada
Soomaliya 13.07.2020. 03:40